महिलाहरु शाररीक सम्पर्क राख्दा किन आवाज निकाल्छन ? यस्तो छ कारण – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन ६, सोमबार १६:०४
एजेन्सी – सेक्सको क्रममा यदि तपाइको पार्टनर उफ आह या आउच जस्ता आवज निकाल्छ भन्दैमा तपाइले यो सोच्नु भएन कि, उनले चरम सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहेका छन् । किनभने यो देखावटी मात्र पनि हुनसक्छ । सेक्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ? यस्तो छ कारण
अधिकांश महिलाहरू सेक्सबाट चरम आनन्द लिन नपाएको उक्त सोधमा उल्लेख छ । ९० प्रतिशत महिलाहरूलेआफूहरू चरम आनन्दसम्म नपुगेको बताएका थिए । ८७ प्रतिशत महिलाहरूले चाँहि आफ्नो पार्टनरप्रति प्रेम सम्बन्धसुमधुर राख्नकै लागि यसरी आवाज निकाल्ने गरेको खुलाए।